Saturday, 10 February 2018 00:47
Bariisaa newspaper Today
Published in The Bariisaa today
Saturday, 10 February 2018 00:41
Saturday, 10 February 2018 00:40
Itoophiyaan walmorkii Waancaa CHAN keessummeessufi
Finfinnee: Bu'uura ispoortii kubbaa miilaa Afrikaa kan ta'e koreen kubbaa miilaa Afrikaa kan wayita ammaa Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa jedhamuun beekamu kan hundeefame ALA bara 1957 ta'uu seenaan ni mul'isa.
Konfedereeshinchi Ardii Afrikaa keessatti ispoortii kubbaa miilaa jaalatamaafi hordoftoota baay'ee qabu horachuuf sochii taasiseen yeroo gabaabaa keessatti biyyoota miseensoota hedduu horachuu danda'eera.
Sochii taasifameenis waancaa kubbaa miilaa dargaggoota Afrikaa, kan dargaggoota guddatootaafi dubartootaa qopheesuudhaan hirmaachisaa jira. Akkasumas, shaampiyoonaawwan kilabootaa, walmorkii mo'aa mo'attootaafi kan waancaa konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa jedhamun beekaman gaggeessaa jira.
ALA bara 2009 irraa kaasee ammoo taphattoonni kilaboota liigiiwwan biyyaa keessatti qofti kan irratti hirmaatan walmorkii waancaa CHAN jedhamu jalqabuudhaan biyyoota adda addaatti gaggeessaa jira.
Walmorkichi waggaa lamatti al tokko biyyoota addaddaatti kan adeemsifamu yoo ta'u, baranas yeroo shanaffaaf dhiheenya kana Morookoo magaaloota adda addaatti adeemsifameera.
Tapha yeroo jahaffaaf waggaa lama booddee ALA bara 2020 adeemsifamu ammoo keessummeessuuf Itoophiyaan konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaarraa Asxaa fudhateetti.
Sirna Asxaa walharkaa fuudhu adeemsifame kanarratti argamuudhaan Pireezidaantiin Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa, Miistar Ahimad Ahimadirraa kan fudhan Obbo Juneedii Baashaa Pireezidaantii Federeeshinii kubbaa Miilaa Itoophiyaati.
Waancaan kubbaa miilaa Afrikaa eedda jalqabamee waggoota 61 kan lakkofsise yoo ta'u, waggootan kanneen keessatti biyyoonni 15 dabaree dabareedhaan keessummeessaniiru.
Itoophiyaan biyyoota konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa hundeessan keessaa takka waan taateef waancaa Ardii Afrikaa kana yeroo sadii qopheessuuf caraa argate turte.
Haa ta'u malee, waancaa CHAN yoo keessummeessitu kun isa jalqabaati. Sababiin isaa ammoo gareen biyyaaleessaa ishee yeroo baay'ee waancaa kanarratti hirmaachuuf wayita dorgomu gulaalaa darbee waan hinbeekneef.
Biyyattiin seenaa waancaa kubbaa miilaa Afrikaa keessatti kan jalqabaa taatuus guddinni ispoortiishee yeroo yeroodhaan gadi guddachaa waan adeemsifamuuf ol siqu dhabusaatiin kan ka'een.
Keessumattuu akkaataan gurmaa'ina kilaboota biyyattii rakkisaa ta'usaati. Hundisaanii jechuun ni danda'amaa kilaboota dhaabbilee mootummaa jalatti gurmaa'aniidha.
Kana ta'uusaanitti bajata mootummaan isaaniif ramaduun waan bulaniif wayita bajatni dhumu hanga kan haaraan isaaniif ramadamutti kilaboonni taphatoota isaanii waan bittinneessaniif achumaan ni diigamu.
Akkasumas, iddoowwan olmaa ispoortii ga'aan waan hinjirreefi kannee jiranis ijaarsa bu'uuraalee misoomaaf sababii jedhamuun abbootii qabeenyaatiin waan dhaalamaniif dargaggoonni iddowwan leenjii dhabuun kan ka'ee taphattoota bakka bu'ootaa horachuun hindanda'amne.
Biyyattiin Istaadiyemoota ammayyaa hinqabdu. Kan qabdus maqaaf ijaaraman malee baay'een isaanii hinxumuramne. Bakka iddoowwan olmaa bal'inaan hinjirreetti shaampiyoonaa akkanaa keessummeessuuf waadaa galuun bor waan nama qaaneessuuf itti yaadamu qaba jenna.
Torban kana/This_Week 12397
Guyyaa mara/All_Days 1821817